Serivisy sy mpandraharaha mpanampy dorpshipping China | Sunson
Tombontsoa azo avy amin'ny dropshipping
Dropshipping dia maodely fandraharahana lehibe ho an'ireo mpandraharaha maniry hanomboka satria mora azo izany. Miaraka amin'ny dropshipping, azonao atao ny manandrana haingana ny hevitra momba ny fandraharahana miaraka amin'ny fika ambany voafetra, izay ahafahanao mianatra zavatra betsaka momba ny fomba hisafidianana sy hividianana vokatra tadiavina. Ireto misy antony hafa mahatonga ny dropshipping modely malaza toy izany.
1. Ilaina ny renivola kely kokoa
Angamba ny tombony lehibe indrindra amin'ny dropshipping dia ny ahafahana manangana fivarotana ecommerce nefa tsy mila manangona dolara an'arivony amin'ny firaketana mialoha. Araka ny fomban-drazana, ny mpivarotra dia tsy maintsy mamatotra magazina fivarotana renivohitra be dia be.
Miaraka amin'ny maodelin'ny dropshipping dia tsy mila mividy vokatra ianao raha tsy efa nanao ny varotra ary efa nandoa ny mpanjifa. Raha tsy misy fampiasam-bola miharihary eo alohany dia azo atao ny manomboka manangona vokatra ary manangana orinasa mahomby amin'ny dropshipping miaraka amin'ny vola kely. Ary satria tsy manolo-tena amin'ny fivarotana amin'ny alàlan'ny lisitra rehetra novidiana teo aloha ianao, toy ny amin'ny orinasa mpivarotra nentin-drazana, dia tsy dia misy atahorana loatra ny manomboka fivarotana fivarotana.
2. Mora ny manomboka
Mora kokoa ny mitantana orinasa ecommerce rehefa tsy mila miatrika vokatra ara-batana. Miaraka amin'ny dropshipping, tsy mila miahiahy momba ny:
Mitantana na mandoa trano fitahirizana
Fonosana sy fandefasana ny baiko
Manara-maso ny lisitra noho ny antony ara-kaonty
Fikarakarana ny fiverenana sy ny fandefasana entana
Mandahatra hatrany ny vokatra sy mitantana ny haavon'ny tahiry
3. ambany ambany
Satria tsy mila miatrika ny fividianana lisitra na fitantanana trano fitehirizam-boky ianao, dia somary ambany ny fandaniambola. Raha ny marina, fivarotana dropshipping maro mahomby no tanterahina ho toy ny orinasa any an-trano, mitaky mihoatra ny solosaina finday sy fandaniana miverimberina vitsivitsy hiasa. Rehefa mihalehibe ianao dia mety hiakatra ireo vidiny ireo nefa mbola ambany ihany raha oharina amin'ny an'ny orinasa biriky sy feta nentim-paharazana.
4. Toerana mora azo
Ny orinasa dropshipping dia azo tanterahina amin'ny toerana rehetra na aiza na aiza misy fifandraisana Internet. Raha mbola afaka mifandray amin'ny mpamatsy sy ny mpanjifa mora foana ianao dia afaka mihazakazaka sy mitantana ny orinasanao.
5. Safidy maro ny vokatra amidy
Satria tsy mila mividy mialoha ny entana amidinao ianao dia azonao atao ny manolotra karazana vokatra mirona any amin'ireo mety ho mpanjifanao. Raha mitahiry entana ny mpamatsy dia azonao atao ny mitanisa azy amidy amin'ny fivarotana an-tserasera tsy misy vidiny fanampiny.
6. Mora kokoa ny fitsapana
Dropshipping dia fomba fanatanterahana mahasoa ho an'ny fanombohana fivarotana vaovao sy ho an'ny tompona orinasa mitady hizaha toetra ny filan'ny mpanjifa amin'ny sokajy vokatra fanampiny, ohatra, kojakoja na tsipika vokatra vaovao. Ny tombony lehibe azo avy amin'ny dropshipping dia ny fahaizany mitanisa ary mety mivarotra vokatra alohan'ny hanatanterahana ny fividianana tahiry be dia be.
7. Mora kokoa ny mizana
Miaraka amin'ny orinasam-pivarotana nentim-paharazana, raha mahazo in-telo ny isan'ny baiko anao, matetika ianao dia mila manao asa intelo heny. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ireo mpamatsy dropshipping, ny ankamaroan'ny asa amin'ny fikarakarana baiko fanampiny dia ho entin'ireo mpamatsy, ahafahanao manitatra amin'ny fanaintainana mihamitombo sy ny asa kely kokoa.
Ny fitomboan'ny varotra dia hitondra asa fanampiny hatrany - indrindra mifandraika amin'ny fanohanan'ny mpanjifa — fa ny orinasa mampiasa ny refin'ny dropshipping indrindra mifandraika amin'ny orinasa ecommerce nentim-paharazana.
Atombohy androany ny orinasanao Dropshipping